Kulan Lagu Dar-dargalinayay Jihooyinka Siyaasada-Horumarineed Ee XDSHSI Oo Ay Ka Soo Qayb Galeen Dhamaan Golaha Wasiirada DDSI Ayaa Galabta Ka Dhacay Hoolka Xarunta Dhexe Ee XDSHSI. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Isniin.27.Oct.2014, kulankan oo ay hogaaminayeen madaxa xarunta dhexe ee XDSHSI mudane Cabdicasiis Maxamed Cabdi iyo madaxa arimaha siyaasada ee XDSHSI mudane Cumar Maxamed Cabdi, ayaa waxaa ka soo qaybgalay dhamaan golaha wasiirada DDSI iyo golaha capenetka ee DDSI.
Kulankan ayaa lagu gorfaynayay arimaha ay ka midka yihiin dhinacyada hirgalinta mashaariicaha horumarka, xaaladaha xubnaha xisbiga ee xafiisyada, unug aas aasiyada xubnaha xisbiga, xogaha dhinaca aragtida xubnaha xisbiga, dhinaca shaqo galinta, habsami u isticmaalka dhinaca miisaaniyadaha, xidhiidhka dadwaynaha iyo
dhinaca dabagalka iyo islaxisaabtanka.
Kulankan ayaa waxaa ugu horayntii ka hadlay madaxa xarunta dhexe ee XDSH lehna awooda madaxwayne ku xigeen
mudane Cabdicasiis Maxamed Cabdi, oo si guud u dulmaray ujeedooyinka iyo anjandayaasha kulankani uu ku qotomo ayaa yidhi "Sidaan wada ogsoonahay XDSHSI waxa uu dadaal dheer oo balaadhan ugu jiraa sidii uu isbadal horumarineed oo xawliya u gaadhsiin lahaa shacabka deegaanka guud ahaanba dhinacyada horumarka,
nabadgalyada iyo maamulka suuban."
Isaga oo sii wada masuulku hadalkiisa waxa uu yidhi "Sidaasi darteed xarunta dhexe ee XDSHSI waxa uu dar dargalinayaa dhamaan unug aas aasiyada iyo unug hoosaadyada ay ka kooban yihin xafiisyada heer deegaan maamulada magaalooyinka, degmooyinka iyo jaamacadaha, taasi oo wakhtiyadii danbe keentay isbadal horumarineed islamarkaana loo baahan yahay in la sii xoojiyo."
Waxaa kale oo uu tibaaxay mudane Cabdicasiis doorka ay hogaaminta deegaanku kuleeyihiin qaybaha kala duwan
ee qaabdhismeeyada unug aas aasiga xafiisyada heer deegaan iyo sida ay u hawlgalayaan.
Waxaa kale oo isaguna ka hadlay kulankaasi madaxa arimaha siyaasada xarunta dhexe ee XDSHSI mudane Cumar Maxamed Cabdi oo ka warbixiyay jihooyinka siyaasaseed ee xisbiga isaga oo si qoto dheer uga warbixiyey sectarada kala duwan ee ay iskugu xidhan yihiin xafiisyada heer deegaan iyo wada shaqaynta waxqabadka
xafiisyada isku sectarka ah.
Waxaana kulankani intii uu socday lagu lafa guray layslana qaatay meelmarinta hirgalinta iyo dar dargalinta qorshayaasha horumarineed ee XDSHSI.